Soundcloud bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na mma amaara audio nyiwe na ụwa na bụ ebe music enthusiasts bụghị nanị-ohere ka ịdekọ na biputere ha ụda kamakwa ịkọrọ na budata ha. Nke a n'elu ikpo okwu dị ka a na-elekọta mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet ikpo okwu maka music hụrụ si gburugburu ụwa. Nke niile atụmatụ, e nweghị obi abụọ banyere eziokwu na ihe kasị mma atụmatụ a n'elu ikpo okwu bụ na ị pụrụ ibudata egwu na-ada site na ya. Otú ọ dị unu nwere ike ọ bụghị mgbe niile-eme kpọmkwem otú na nwere ike iji nyiwe dị ka TunesGo ime otú ahụ.
Olee otú ibudata music si soundcloud ka itunes iji TunesGo
Soundcloud dị ka gị Personal Music Isi Iyi
Nzọụkwụ 1 Open TunesGo
Nzọụkwụ 2 Họrọ Record:
Nzọụkwụ 3 play music / gụgharia
Ugbu a ị chọrọ na-egwu ma ọ bụ enuba na music nke na-ịchọrọ ị Dekọọ. Iji idekọ, na-emeghe ma mgbe ahụ na-egwu ndị chọrọ track.
Nzọụkwụ 4 Pịa "rec"
Nzọụkwụ 5 Chọta songs ke "Kọrọ"
Wondershare TunesGo ga-adị ihe dị ịtụnanya ikpo okwu maka ndị chọrọ ka ibudata music na listi ọkpụkpọ site na Soundcloud ma na-enweghị ike ime otú ahụ ozugbo. Nke a n'elu ikpo okwu bụ ihu ọma a music transfer na ijikwa ngwa nke-enyekwara gị ibudata egwu na ngwaọrụ gị. Ndị na-esonụ bụ 5 isi atụmatụ TunesGo:
1. Nyefee music-TunesGo na-eme ka o kwe gị omume nyefee music n'etiti iche iche nyiwe na sistem gụnyere iTunes na Android wdg Ọ pụkwara inyere gị aka mmekọrịta music n'etiti ekwentị gị na PC ma si otú na-ahapụ gị ụtọ music na ngwaọrụ gị niile na-enweghị nyefee ya aka.
2. Jikwaa music-bụ ihe ọzọ na-ghar atụmatụ nke TunesGo bụ na ị nwere ike ijikwa music-eji nke a n'elu ikpo okwu. Ọ na-enyere hazie gị egwu na wepụ ugboro ugboro ndị izere decluttering na mgbagwoju anya.
3. Jikwaa music-bụ ihe ọzọ na-ghar atụmatụ nke TunesGo bụ na ị nwere ike ijikwa music-eji nke a n'elu ikpo okwu. Ọ na-enyere hazie gị egwu na wepụ ugboro ugboro ndị izere decluttering na mgbagwoju anya.
4. restores na azụ na--elu faịlụ-TunesGo nakwa awade ị dị ebube atụmatụ nke Ichekwa ndabere na Iweghachi gị music na ọzọ di iche iche nke faịlụ na nke a pụtara na gị music dịghị mgbe ọ ga-efu ọbụna mgbe ị na-eche ihu a usoro okuku.
5. Record music-ọzọ mma nke TunesGo si Wondershare-enye gị bụ na ọ na-enye gị ohere nwekwara idekọ ndụ music na-enwe ya mgbe e mesịrị. Ọ bụ ihu ọma a n'elu ikpo okwu site na nke ị nwere ike dee ọ bụla ụda ma ọ bụ na-agba ọsọ music na ndabere na gị usoro na na kwa enweghị ihe ọ bụla disturbances.
> Resource> Music> Olee otú Download Music si Soundcloud ka iTunes